Jaad | Wararka Safarka
Sawir | The Guardian Nigeria
Dad badan oo safar ah kuma dhiirran inay u safraan Chad. Colaadaha iyo weerarada argagaxiso waxay keeneen in dalxiisku uusan u kobcin xawaare iyo xoog sida wadamada kale ee qaaradda Afrika. Sidaa darteed kaabayaasha caafimaadka, gaadiidka iyo dalxiiska aad bay khatar u yihiin. Si kastaba ha noqotee, waa xaqiiqo la'aanta waxaas oo dhan oo ku riixaya safarleyda ugu dhiirran inay u safraan Chad iyagoo raadinaya tacabur.
Maxaad ugu safraysaa meeshan fog iyada oo aad khatar u ah? Doodaha la isku raacsan yahay waxaa ka mid ah oases-ka lamadegaanka woqooyi, soojiidashada dalxiis ee harada Chad, ama xayndaabyo badan oo xayawaan duurjoog ah oo ku yaal jardiinooyinka qaranka.
0.1 Lamadegaanka Ennedi
0.2 Harada Chad
0.4 Beerta Qaranka Zakouma
1 Sidee loo safraa Chad?
2 Amniga Chad
3 Tallaabooyinka nadaafadda
Saxaraha Saxaraha ayaa ah kan ugu weyn adduunka. Waxaa ka buuxa buushooyin ay kaliya joojiyeen qaababka dhagaxa sida Saxaraha Atlas, Buuraha Ahaggar ama Buuraha Tibesti. Si kastaba ha noqotee, lamadegaanka Ennedi oo leh dhul dhagax ah oo u gaar ah ayaa laga yaabaa inuu yahay geeska ugu quruxda badan ee Sahara.
Soojiidashada ka mid ah waxaan ku qori karnaa harooyinka lamadegaanka, buuraha, biyamareenka, sawir gacmeedyadii hore iyo meelaha qadiimiga ah ee badda ee hadda ku jira badaha dunes, kuwaas oo la sameeyay markii harada Chad la ballaadhiyay.
Kiiloomitir badan oo ka sii fog N'Djamena, waxaad ka heli doontaa waxa mar ahaa mid ka mid ah harooyinka biyaha macaan ee ugu weyn adduunka.
Ilaa horaantii 70-yadii, harada Chad waxay u egtahay bad ku dhextala qaarada Afrika oo ay wadaagaan wadamo dhowr ah sida Niger, Nigeria, Chad iyo Cameroon. In kasta oo kordhintiisu noqon karto 25 km000 xilliga ugu sarreeya ee xilli roobaadka, in yar oo harooyinka ka mid ah ayaa qallalaya oo afartankii sano ee la soo dhaafay waxay lumiyeen 2% dusha sare, iyadoo ay ka dhalan karto dhibaatooyin xagga deegaanka iyo bulshada ah oo ka careysiiya kalluumeysatada beeraley.
Gudaha magaaladan, guryaha dhoobada ah ee quruxda badan ee rinjiga lagu qurxiyo waa kuwo cajiib ah, oo kudareynaya taabashada midabka muuqaalka muuqaalka leh ee midabada madow ee madow
Beerta Qaranka Zakouma
Zakouma waxay ku taal koonfurta Sahara sida waqooyiga ugu weyn jardiinooyinka qaran ee waaweyn iyo Waa mid ka mid ah tusaalooyinkii ugu dambeeyay ee nidaamka deegaanka Suudaan-Saaxil.
Muuqaalka jardiinadan qaran waa mid gaar ah, oo isugu jira goobo bannaan oo leh dhul qoyan, keymo savanna ah iyo dhul-xoqan.
In kasta oo dagaalladii sokeeye iyo ugaarsigu ay halakeeyeen xayawaankii aagga, haddana tirada xoolaha ayaa si gaar ah u koray iminkana waxaa jira xoolo badan oo lo 'gisi ah, diir iyo diir. Intaas waxaa sii dheer, tiro badan oo shimbiro ah ayaa ku nool dhulka qoyaanka ah ee Zakouma iyadoo ku dhowaad kalabar giraafyada Kordofan ee Afrika ay ku noolyihiin jardiinadan, taas oo ka dhigaysa meeshan muuqaal sixir ah.
Xayawaanka kale ee ku nool beerta ayaa ah haramcadka, shabeelka iyo dhurwaaga dhibcaha iyo sidoo kale maroodiyaal fara badan.
Halkaan socdaalku wuxuu ku ogaan karaa dhinaca cagaaran uguna raaxada badan ee Chad bacaadka ah kuna nasto webiga Chari. Caasimadda suufka dalku kama badna meel dib u dhac ah, oo ah magaalo wacan oo hurdo leh oo hooska geedo waaweyn ah. Matxafka Gobolka Sarh wuxuu soo bandhigayaa hub qadiim ah, aalado muusig iyo waji duubis. Habeenkii, Hippos badanaa waxay ka waraabsadaan dhinacyada Webiga Chari.
Sidee loo safraa Chad?
Si loo galo Chad, waxaa lagama maarmaan ah in la helo fiiso. Dalkan safaarad kuma lahan Spain, sidaas darteed fiisada waa in laga codsadaa Paris safaaradda Chad. Tan awgeed, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la soo bandhigo, marka lagu daro dukumiintiyada kale, baasaboorka ugu yaraan shaqeynaya 6 bilood, shahaadada tallaalka cudurka qandhada hurdiga ah iyo warqad casuumaad ah.
Iyada oo la tixgelinayo xaaladda qalafsan ee ka jirta Chad, sababo nabadgelyo awgood ayaa lagu talinayaa in la bixiyo macluumaadka xiriirka iyo in safaaradda Isbaanishka ee Cameroon la ogeysiiyo safarka iyo joogitaanka Chad.
Waqtigan xaadirka ah laguma talin karo inaad u safarto Jaad haddii aysan aheyn xaalad baahi daran. Haddii socdaalku weli go'aansado inuu soo galo waddanka, way ku habboon tahay in laga fogaado dhammaan aagagga xudduudda khatarta ay leeyihiin weeraryahannada hubaysan iyo gaar ahaan xadka Niger, khatarta argagixisada ee Boko Haram awgeed.
Si aad ugu safartid Chad, waa qasab in lagaa talaalo cudurka qandhada huruuda. Wasaaradda arrimaha dibaddu waxay ku talineysaa in laga tallaalo cagaarshowga A iyo B, qandho-xumada, gawracatada iyo qoorgooyaha, iyo sidoo kale tallaalka teetanada. Sidoo kale, waxaa lagugula talinayaa inaad raacdo daaweyn kahortaga cudurka duumada kahor intaadan usafrin dalkan Bartamaha Afrika iyo inaad qaado taxadarka lagama maarmaanka ah ee kaneecada.
Mar alla markii aad dalka joogto, waxaa lagugula talinayaa inaad qaaddo talaabooyin nadaafadeed oo gaar ah: markasta cun biyaha dhalada ku jira, iska ilaali barafka iyo khudradda ceyriinka ah ee aan la diirin
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Chad
Masada, safarka taariikhda